Dawlada Uganda Ayaa Beenisay In laga Heysto Ciidamo Kuwuuda Ah – STAR FM SOMALIA
Dawlada Uganda Ayaa Beenisay In laga Heysto Ciidamo Kuwuuda Ah
Afhayeenka Ciidanka Militariga Uganda, Captain Paddy Ankunda, ayaa si xoogan u diiday in Ururka Al Shabaab uu haysto maxaabiis ka tirsan Ciidanka Militariga Uganda, ee qaybta ka ah Amisom.
Qoraal uu Ururka Al Shabaab soo saaray Talaadadii, ayaa waxaa lagu sheegay inay gacanta ku hayaan maxaabiis aan tiradoodu la sheegin, kana tirsan Ciidanka Uganda, isla-markaana ay ku qabteen weerarkii 1-dii bishaan ku galeen Xerada Amisom Ee Degmada Janaale.
Afhayeenka oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Kampala, ayaa sheegay inaanay Shabaabku sheegan karin nolosha in ay ku hayaan askartooda, isla-markaana ay tahay been daahir ah.
“Shabaab ma sheegan karaan inay haystaan wax ka tirsan ciidankeena, waa been daahir/saafi ah.” Ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka Militariga Uganda.
Afhayeenka, ayaa yiri “Waxaa dhici karta inay haystaan wa-xoogaa dareyska ciidanka. Waxaan qabaa inay u xiran doonaan dadka ay u soo bandhigayan.”
Paddy Ankunda, ayaa sidoo kale beeniyay warar laga soo xigtay diblomaasiyiin Reer Galbeed ah oo Somaliya ku sugan, kuwaa oo sheegay in weerarkii Janaale lagu dilay 50 askari oo Ugandes, halka 50 kalana ay maqan yihiin amaba la qafaashay.
“Ilaha Reer Galbeedka ee dhimashada Somaliya waa mid khalad ah.” Ayuu yiri Paddy Ankunda, oo ku celiyay in 12 askari oo keliya looga dilay weerarka Janaale, isla-markaana aynaan jirin wax askar ah oo afduub ahaan kaga maqan.